बिहीबार, जेठ १२ २०७९ ०५:५९ PM
एजेन्सी । लगानीको प्रतिफल नचाहने कमै हुन्छन् । जहाँ लगानी हुन्छ त्यहाँ प्रतिफल जोडिन्छ । यदि कसैलाई प्रतिफल चाहिँदैन भने सत्य हो, उसले लगानी गर्दैन ।
मानौं तपाईंले कुनै चिजमा लगानी गर्नुभयो । त्यसबापत रिटर्न कति मिल्ला ? १०, १०० या १००० प्रतिशत ?
यदि साँच्चिकै लगानीको प्रतिफल आउने हो भने माथि भनिएको प्रतिशत धेरै नै हो । तर, अहिले लगानी एउटा माध्यम भाइरल बनिरहेको छ । नेपालमा त त्यसलाई अवैध मानिएको छ । उक्त माध्यममा कारोबार गरेबापत केही पक्राउसमेत परिसकेका छन् । यद्यपि विश्वका कैयौं देशमा भने यो वैध मानिएको छ । त्यो हो, क्रिप्टोकरेन्सी, शिवा इनु ।
१ रुपैयाँ बराबरको लगानी १५ महिनामा बढेर ४ लाख रुपैयाँ पुग्छ भन्ने सुन्दा तपाईं–हामीलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ । तर, यो कुनै काल्पनिक कुरा होइन । सत्य हो ।
ख्यालठट्टामै भएको सुरुवात
‘कुकुरको पनि दिन आउँछ’ भन्ने उखानलाई शिवा इनु क्रिप्टोकरेन्सीले प्रमाणित गरेर देखाइदिएको छ । ‘जापानी प्रजातिको एउटा कुकुर’ ले आफ्नो मात्रै राम्रो दिन ल्याएन, आफूलाई विश्वास गरेर लगानी गर्ने करोडौंलाई मालामाल बनाइदियो ।
जापानी प्रजातिको कुकुर अर्थात् यसकै नाममा सुरु भएको एउटा क्रिप्टोकरेन्सी, शिवा इनु । ख्यालठट्टामै सुरु भएको उक्त क्रिप्टोकरेन्सीले लन्च भएको १५ महिनामै झन्डै साढे ३ करोड प्रतिशत रिटर्न दिइसकेको छ ।
विश्वको १३ औं ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी
शिवा इनुको सुरुवात सन् २०२० अगस्टमा भएको थियो । अहिले यो करिब १९ बिलियन डलरको एमक्यापसहित विश्वको १३ औं ठूलो क्रिप्टोकरेन्सीको स्थानमा छ । यति छोटो समयमा यति धेरै कमाइ गराउने अर्को ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनलाई निकै पछाडि छाडेको छ । १५ महिना पहिले ज–जसले यसमा १ रुपैयाँ लगानी गरे त्यसको भ्यालु आजको दिनमा ४ लाख पुगेको छ ।
इथेरम बेस्ड टोकन शिवा इनु
क्वाइन बेसको डाटाअनुसार गत वर्षको १ अगस्टमा यो मिमक्वाइनको भ्यालु १७ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले ? अहिले यसको भ्यालु ३५२६१४ रुपैयाँ छ । कुनै बेला यसको भ्यालु जम्मा ५७.६ रुपैयाँमा पुगेको थियो । यसलाई पपुलर मिमक्वाइन डोजिक्वाइनको प्रतिस्पर्धामा सुरु गरिएको थियो । यस्तै यो क्रिप्टोकरेन्सीलाई इथेरम टोकनको रुपमा पेस गरिएको थियो ।
एलन मस्कको ट्विटका कारण यो चर्चामा रह्यो । चर्चासँगै यसको भ्यालु पनि बढेर अहिलेको मूल्यमा पुगेको हो ।
शनिबार १ माघ २०७८ ०८:५९ AM मा प्रकाशित